Wordpress အား XAMPP တွင် install လုပ်နည်း – AnZarTone
WordPress အား XAMPP တွင် install လုပ်နည်း
WordPress ကို လေ့လာနေသူတွေ အနေနဲ့ online မှာ စမ်းကြည့်ဖို့ထက် ပထမဆုံး offline မှာ စမ်းကြည့်တာက ပိုကောင်းပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရဲ့ နှေးလွန်းတဲ့ internet connection ကြောင့် ဖြစ်သလို၊ offline မှာ စမ်းခြင်းက online မှာ စမ်းခြင်းထက် ပိုမို မြန်ဆန်ပြီး အလွယ်တကူ ပြောင်းလဲနိုင်တာကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Wordpress ကို offline မှာ စမ်းဖို့အတွက် ကိုယ့်ရဲ့ computer မှာ web server တစ်ခုနဲ့ database ဆောက်ဖို့အတွက် MySql ကို run ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီအတွက် web server တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Apache နဲ့ MySql ကို run ပေးနိုင်တဲ့ Xampp ကို install လုပ်ထားရပါမယ်။
Xampp ကို install လုပ်ပြီးသွားရင် wordpress ရဲ့ နောက်ဆုံးထွက် version ကို http://wordpress.org/ မှာ သွားပြီး Download လုပ်ထားပါ။ Download လုပ်ထားတဲ့ zip file ကို extract လုပ်ပါ။ Extract လုပ်ထားတဲ့ wordpress folder ကို xampp/htdocs ထဲကို ထည့်လိုက်ပါ။
ပြီးသွားရင် computer desktop မှာရှိတဲ့ Xampp ကို ဖွင့်ပြီး Apache နဲ့ MySql ကို start လုပ်ပေးလိုက်ပါ။ Apache နဲ့ MySql စတင်ပြီး run ပြီဆိုရင် internet browser (Firefox, IE, Chrome စသည်ဖြင့်) တစ်ခုခုကို ဖွင့်လိုက်ပါ။ browser ရဲ့ address bar မှာ http://localhost/xampp/ ကို ရိုက်ပြီး ဖွင့်ပါ။
XAMPP for Windows ဆိုပြီး webpage တစ်ခု ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီ page ရဲ့ ဘယ်ဘက် အောက်နားမှာ PhpMyAdmin ဆိုတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ နှိပ်လိုက်ပါ။ PhpMyAdmin page ကို ရောက်ပြီဆိုရင် အလယ်နားလောက်မှာ MySQL database ဆိုတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီ MySQL database ရဲ့အောက်မှာ create new database ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ အောက်က box ထဲမှာ database ရဲ့ နာမည်ကို ရိုက်ထည့်ပါ။ ဥပမာ – anzartone လို့ ပုံမှာ ပေးလိုက်ပါတယ်။ Collation ဆိုတဲ့ နေရာမှာ utf8_unicode_ci ဆိုတာကို ရွေးပါ။ ပြီးသွားရင် Create button ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
Database Created Succefully
Database ကို Create လုပ်ပြီးသွားရင် Xampp က message တစ်ခု ပြပေးပါလိမ့်မယ်။
xampp/htdocs/wordpress folder ထဲမှာ wp-config-sample.php ဆိုတဲ့ file ကို ရှာပါ။ တွေ့ပြီဆိုရင် အဲဒီဖိုင်ကို notepad နဲ့ ဖွင့်လိုက်ပါ။ အောက်က စာကြောင်းတွေကို ပြင်ရပါမယ်။
( database_name_here နေရာမှာ ကိုယ်ပေးခဲ့တဲ့ database နာမည်ကို ထည့်ပါ။ )
( username_here နေရာမှာ root လို့ ပြောင်းပါ။ )
( password_here နေရာမှာ ဘာမှ ဖြည့်စရာ မလိုပါဘူး။ password_here ကို ဖျက်ပြီး ကွက်လပ်အတိုင်း ထားပါ။ )
Edit These lines …
Save as “WP-Config.php”
ဒါတွေ ပြင်ပြီးသွားရင် Save as နဲ့ wp-config.php ဆိုပြီး Save လိုက်ပါ။ Browser ရဲ့ address မှာ http://localhost/wordpress/wp-admin/install.php လို့ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်လိုက်ပါ။ Blog title နေရာမှာ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ နာမည်ကိုပေးပါ။ Username နေရာမှာ ကိုယ်သုံးမယ့် admin username ကို ဖြည့်ပါ။ Password,twice နေရာမှာတော့ ကိုယ်ပေးချင်တဲ့ password ကို အပေါ် အောက် အတူတူ ထည့်ပါ။ Your Email နေရာမှာ email တစ်ခုခုကို ရိုက်ထည့်ပါ။ ပြီးသွားရင် Install WordPress ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
Success ဆိုပြီး ပေါ်လာခဲ့ရင် Login ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ Login page ကို ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီမှာ ကိုယ်ပေးခဲ့တဲ့ useranme နဲ့ password ကို ဖြည့်ပြီး login ဝင်ပါ။ Dashboard page တစ်နည်းအားဖြင့် Admin page ကို ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီမှာ wordpress ကို offline မှာ install လုပ်ခြင်း (Xampp တွင် install လုပ်ခြင်း) အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးသွားပါပြီး။ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် စမ်းလို့ ရပါပြီဗျာ။
မရှင်းလင်းတာတွေ ရှိခဲ့ရင် ကျွန်တော့်ကို မေးနိုင်ပါတယ်။
This entry was posted in How To and tagged install wordpress. Bookmark the permalink.
← နှိုးစက်ပိတ်ပြီး ပြန်အိပ်တတ်သူတွေ အတွက် နှိုးစက်အသစ်
One thought on “WordPress အား XAMPP တွင် install လုပ်နည်း”
အကို database , my sql အကြောင်းတွေကိုတင်ပေးပါဦး